အာဘွိုင်းတစ်ယောက် ရေကြီးပြီး တောင်ပြိုတာကြောင့် မော်လမြိုင်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ အကြောင်း…. - Zeekwat Hot News
အာဘွိုင်းတစ်ယောက် ရေကြီးပြီး တောင်ပြိုတာကြောင့် မော်လမြိုင်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ အကြောင်း….
August 9, 201902234
အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ လူသိများပြီး Travel Vlog တွေကိုလည်းပြုလုပ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အာဘွိုင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့ နေရာအနှံအပြားကိုလည်း သွားရောက်ပြီး ချစ်စဇနီးလေးနဲ့အတူ ရိုက်ကူးမှုတွေကို ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အာဘွိုင်းကတော့ လက်ရှိမှာလည်း မော်လမြိုင်မြို့ကို ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Photo : Ah boy fb
အာဘွိုင်းကတော့ “မော်လမြိုင် – ရန်ကုန် လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ ပေါင်မြို့ သဲဖြူကုန်းကျေးရွာမှာ တောင်ပြိုလို့ ကားလမ်းပါပိတ်သွားပါပြီ။ (လူအသေပျောက်လည်းရှိပါတယ်)အခုထိ မိုးကလည်းလုံးဝ မရပ်သေးသလို၊ သံလွင်တံတားလည်း ပိတ်ထားပါတယ်။ မော်လမြိုင်မြို့ထဲမှာလည်း နေရာတော်တော်များများဆိုးရွားစွာ ရေမြုပ်နေလို့ ကျနော် ဘယ်လိုမှ ရန်ကုန်ပြန်လာလို့မရဖြစ်နေပါတယ်။” လို့ ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မိုးသည်းလွန်းတာကြောင့် မြေပြိုပြီး ရေကြီးနေတဲ့အပြင် လမ်းတွေအားလုံးလည်း ရေပြည့်နေတာဖြစ်လို့ ရိုက်ကူးရေးတွေလည်း တက်ရောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ အာဘွိုင်းက ပြောထားပါတယ်။ မော်လမြိုင်ကသူတွေနဲ့ အာဘွိုင်းတို့ ဘေးကင်းကြဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ကြပါဦးနော် ပရိသတ်ကြီးရေ။
Source : Kyaw Phyo Tun fb
အဆိုတောတြစယြောကအြဖှစနြဲ့ လူသိမွားပှီး Travel Vlog တှကေိုလညြးပှုလုပနြတေဲ့သူတစယြောကဖြှစတြဲ့ အာဘှိုငြးကတော့ မှနမြာနိုငငြံအနှံ့မှာရှိတဲ့ နရောအနှံအပှားကိုလညြး သှားရောကပြှီး ခစွစြဇနီးလေးနဲ့အတူ ရိုကကြူးမှုတှကေို ပှုလုပနြတောဖှစပြါတယြ။ အာဘှိုငြးကတော့ လကရြှိမှာလညြး မောလြမှိုငမြှို့ကို ရောကရြှိနတောဖှစပြါတယြ။
အာဘှိုငြးကတော့ “မောလြမှိုငြ – ရနကြုနြ လမြးမပေါမြှာရှိတဲ့ ပေါငမြှို့ သဲဖှူကုနြးကွေးရှာမှာ တောငပြှိုလို့ ကားလမြးပါပိတသြှားပါပှီ။ (လူအသပွေောကလြညြးရှိပါတယြ)အခုထိ မိုးကလညြးလုံးဝ မရပသြေးသလို၊ သံလှငတြံတားလညြး ပိတထြားပါတယြ။ မောလြမှိုငမြှို့ထဲမှာလညြး နရောတောတြောမြွားမွားဆိုးရှားစှာ ရမှေုပနြလေို့ ကနွြော ဘယလြိုမှ ရနကြုနပြှနလြာလို့မရဖှစနြပေါတယြ။” လို့ ရေးသားထားတာဖှစပြါတယြ။
မိုးသညြးလှနြးတာကှောငြ့ မှပှေိုပှီး ရကှေီးနတေဲ့အပှငြ လမြးတှအေားလုံးလညြး ရပှညြေ့နတောဖှစလြို့ ရိုကကြူးရေးတှလညြေး တကရြောကနြိုငတြော့မှာမဟုတဘြူးလို့ အာဘှိုငြးက ပှောထားပါတယြ။ မောလြမှိုငကြသူတှနေဲ့ အာဘှိုငြးတို့ ဘေးကငြးကှဖို့ ဆုတောငြးပေးလိုကကြှပါဦးနြော ပရိသတကြှီးရေ။
မွေးနေ့မှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ချွေးထွက်အောင် အလှူအတန်းတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဖွေးစိန်လေး
မိန်းကလေးတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နာမည်ကြီး D&C အတွက် ကြော်ငြာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း